Cunto-dhaqameed Irish Soda ah oo Cunto ah (4 Cunto) - Sugar Geek Show - Rooti Degdeg Ah
Rooti Soodha-dhaqameed Irish ah
Rootiga caadiga ah ee Irish soda waxaa lagu sameeyaa kaliya afar maado
Maanta waxaan sameyneynaa rootiga soodhaweynta ah ee Irish-ka loo yaqaan 'Saint Patricks day'! Rootiga soodhaha leh ee loo yaqaan 'Irish soda' waa mid jilicsan oo jilicsan gudaha wuxuuna leeyahay qolof quruxsan oo dibedda ah.
Khamiir looma baahna in la sameeyo rootiga soodhaweynta ee caadiga ah. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa afar maaddooyin oo fudud.
Baastada ama rootida keega
Waa intaas! Afartan walxood waxay sameeyaan roodhida macaan ee dhadhanka cajiibka leh ee foornada ka jirta oo ku dubatay subagga iyo macaanka.
Ma ubaahantahay inaad u isticmaasho keega ama rootida keega rootiga Saxanka ah ee Irish soodhada ah inuu noqdo?
Waxaan ku arkay waxyaabo badan oo cuntada ah oo khadka tooska ah loogu adeegsado rootiga Irish soda ee isticmaala daqiiqda All-Ujeedada iyo si daacadnimo leh, haddii aad burkan isticmaasho rootigaagu aad buu u adkaan doonaa. Xaqiiqdii waxaad ubaahantahay inaad isticmaasho borotiinkaas hoose, bur jilicsan sida keega ama burka rootiga si rootidaadu ufiicnaato oo u qalanto oo aan cufneyn.
Hoos ka aqri taariikhda rootiga soodhada Irish iyo sababta keega iyo daqiiqda cajiinka loogu isticmaalay halkii loo isticmaali lahaa Ujeedada oo dhan ama daqiiqda caadiga ah.
Waa maxay rootiga dhaqanka ee Irish soda?
Rootiga Soodhaha waa rooti dhaqso badan oo lagu sameeyo soodhaha halkii khamiir laga samayn lahaa. Waxay caan ka noqotay Ireland qiyaastii waqtiga Abaaro baradho Irish ee 1845-1849 oo ah raqiis laakiin nafaqo leh.
Cunto dhaqameedka Irishka ee soodhaha leh wuxuu adeegsadaa kaliya afar walxo, Daqiiq, Cusbo, Dubitaanka Soodhaha, Buttermilk.
Anigu sida caadiga ah waxaan ahay nuugista runta dhaqanka iyo saxda ah laakiin waa inaan dhahaa waxaan doorbidaa wax ka beddelka casriga ah ee subagga iyo ukunta lagu daray. Kala duwanaanshaha qaar ayaa sidoo kale ku jira sabiib ama durdurro kuwaas oo siiya rootiga soodhiyaha Irish xoogaa dhadhan fiican ah.
Ma u baahan tahay caano subag si sax ah Irish soodhada rootiga ah?
Cunto dhaqameedka Irish-ka ee soodhaha laga sameeyo waxaa laga sameeyaa maaddooyin aan qaali ahayn oo waqtigaas la heli karay.
Caano dhanaan ayaa runtii ahaa wixii markii hore la isticmaali jiray, ma ahayn caano subag. Caanaha dhanaan waa caano dhanaanaaday. Uma fiicna cabitaanka. Markaa caano-maaluhu waa inay ka fekeraan qaab ay ku iibiyaan caano aan si kale waxtar lahayn.
Iibsashada caano dhanaan ayaa ka raqiisanaa iibsashada caano cusub sidaa darteed waxay ahayd ikhtiyaar aad u wanaagsan oo wax lagu dubo. Laakiin si looga dhigo caano dhanaan in ay ka shaqeeyaan cuntada, soodhada ayaa loo baahday si ay u keento falcelin (aka goobooyin) si rootigu u kaco.
Maalmahan, waxaan haysannaa caano subag oo la mid ah caanaha dhanaan. Haddii aadan lahayn caano-caano, waxaad ku dari kartaa laba qaado oo khal cad ah ama liin dhanaanta ah laba koob oo caano caadi ah oo walaaq.
Waxaad sidoo kale ku dari kartaa 1 1/2 qaado oo ah kareem tartar caanaha waxaadna heli kartaa natiijooyin la mid ah.
Voila, caano subag oo macmal ah.
dhadhanka isku darka keega ee sanduuqa sida guriga lagu sameeyo
Sidoo kale waad iibsan kartaa caano subag budo ah inaad biyaha kudarsato si aad uheshid caano subag markasta oo aad rabto adigoon ka walwalin inay ku dhacdo firinjeerka.
Sideed u samaysaa rootiga soodhada Irish?
Sameynta rootiga soodhada ee Irish ma noqon karin wax fudud. Sifiican iskaga shaandhee budada keega, soodhaha, iyo milixda ka dibna ceel fiican ka samee bartamaha. Ku dar nuskaaga caano subagga ah oo si tartiib ah ugu laalaadi walxaha qalalan ee ka baxsan bannaanka una sii jeedda bartamaha. Ka dib ku dar caanaha intiisa kale oo isku laab illaa ay wax walba ka qoyaan.
U samee qaab kubbad qallafsan, ku boor dusha sare bur xoogaa ah oo ha ilaawin inaad iskutallaab ku gooyso dusha sare!
Waxaad ku karisaa foornada dusheeda ama digsi culus oo leh doolsha dusha sare. Waa intaas!
Iskutallaabtu maxay uga dhigan tahay rootiga soodhada Irish?
Iskutallaab ayaa badanaa lagu gooyaa dusha sare ee rootiga soodhada Irish ka hor intaadan dubin. Goyntaani waxay u oggolaanaysaa roodhida inay si habboon u faafto iyadoon la kala qaybin oo ay noqoto misshapen. Afartan qaybood ayaa sidoo kale loo yaqaan ' farmaajo “. Markaad adeegayso, kala qaybi rootiga afar meelood adigoo isticmaalaya iskutallaabta dusha sare ee rootiga hage ahaan.
Halyeeyga Irish wuxuu kaloo sheegayaa in iskutallaabtaan rootiga saaran ay jinniyada sharku ka celiso!
Miyuu rootiga soodhada Irishku runtii yahay Irish?
Rootiga Soodhaha laguma abuurin Irland laakiin Irishku wuxuu ka dhigay waxa ay maanta tahay baahi dartii. Markii dubista soodhada loo helay sidii wakiil soo kacaya, Irishku wuxuu bilaabay inuu u adeegsado inuu ka sameeyo rooti aan qaali ahayn bur bur sarreen jilicsan (aka cake ama daqiiqda cajiinka) taas oo inta badan lagu beero deegaanka adag ee Ireland.
Dhaqan ahaan, khamiirka waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo rootiga laakiin wuxuu ubaahanyahay bur qamadi adag (aka All-purpose flour) inuu sifiican ushaqeeyo kaasoo qaali ahaa oo ay adagtahay in la helo.
Ka dib qarnigii 20aad, halka adduunka intiisa kale u dhaqaaqeen dhanka rootiga la dubay, Irishku wuxuu ku dhegay rootigooda soodhada sidaasna wuxuu ugu magacaabay rootiga Irish soda.
Muxuu dhadhamiyaa rootiga Irish soda?
Markii ugu horreysay ee aan cuno rootiga soodhiyaha ee Irish-ka ah waan yara yaabay ma ahayn sida roodhi aad u eg. Roodhi wuxuu ku jiraa magaca dhammaantiis. Laakiin dhab ahaantii, rootiga soodhada ee Irishku wuxuu u eg yahay scon weyn. Jilicsan oo jilicsan gudaha laakiin leh qolof burbursan.
Dhadhanka rootiga dhaqameedka Irish-ka waa mid qurxoon. Dhadhan badan kama dhex muuqdo rootigan maxaa yeelay dhab ahaantii waxaa loola jeedaa in loogu adeego sida cuntada oo kale Cunnada Irishka . Dareenka rootiga saxda ah ee Irish soda waa mid adag laakiin ma adka oo wuxuu leeyahay qolof bannaanka ah oo qoyan.
Rootiga soodhawda ee Irish macaan ayaa laga yaabaa inay lahaato sonkor, ukumo, subag iyo waxyaabo kale sida miraha caraway iyo sabiib oo lagu daray. Noocan casriga ah ee rootiga Irish soda wuxuu uga egyahay buskud ama scone macaan roodhida waana ka jilicsan tahay cunitaankiisa laakiin wuxuu u eg yahay macmacaan.
Waa maxay habka ugu wanaagsan ee loo cuno rootiga soodhada Irish?
Markaa haddii rootiga soodhada ee Irishku u eg yahay scone aad u weyn markaa habka ugu wanaagsan ee loo cuno waa sida inaad cunayso iskoon. Ku diir wax yar oo subag ah ama macaanka ayaa dhadhamiya kan ugu fiican.
Kala jar rootigaaga soodhaha ah ee loo yaqaan 'Irish soda' oo ku dub rootiga daqiiq ama laba daqiiqo si aad u kululaato ka dibna ugu dar xoogaa subag jilicsan. Xaqiiqdii waan jeclahay jeex diiran oo ah rootiga soodhada Irish subaxdii aniga oo qaxwada leh.
Marabtaa cunnooyin badan oo Irish ah? Fiiri kuwan!
Roodhi soodhada Irish macaan
Cake ee Irish Cream Cake
Keega jilicsan ee cagaaran
Cunto biin Guinness
Rooti soodho dhaqameed Irish ah oo lagu sameeyay afar walxood oo keliya. Sirta ayaa u adeegsaneysa burka keegga rootiga ugu fiican ee dhadhamiska rootiga Irish. Waqtiga Diyaarinta:5 daqiiqado Waqtiga karinta:Afar. Shan daqiiqado Kalori:235kcal
▢16 ounces (454 g) bur keeg ama burka rootiga (9% borotiin ama ka hooseeya)
▢1 1/2 qaaddo Fixiso
▢14 ounces (397 g) caano subag ama 14 wiqiyadood oo caano ah oo lagu daray 2 qaado oo khal khal cad ah
▢Foornada Nederlandka ama dheriga weyn ee daboolan
Kuleyli foornadaada ilaa 425ºF
Ku wada kari daqiiqdaada, soodhada iyo cusbada baaquli weyn
Si fiican ceelka uga sameyso bartamaha ka dibna ku dar kalabar nalkaaga subagga, si tartiib ah u walaaq si aad isugu darto
Ku dar inta kale ee caano-caatada ah oo sii wad si tartiib ah u walaaq ilaa ay cajiinka dhejisku ka samaysmayo
Dhig cajiinka dhejiska ah kursiga shaqada ee burka-boodhka ah
Isku laab cajiinka dhowr jeer (2-3) si aad u sameysid kubad laakiin ha ku badsan shaqada ama rootigu wuu adkaan doonaa.
Isticmaal mindi af badan si aad ugu gooyso 'iskutallaab' dusha sare ee cajiinka si aad ugu oggolaato ballaadhinta intaad wax dubayso
Ku dabool cajiinka foornada dusheeda oo dabool. Ku kari 425ºF 30 daqiiqo ka dib kashifa oo dub ilaa 15 daqiiqo oo kale ama illaa heerkulka gudaha ee rootigaagu gaadho 195ºF-200ºF
Ku darso rootigaaga soodhada ah ee kuleylka ah diirimaad leh subag iyo malmalaado ama dhinac u dhig hilib qadhaadh. Roodhigan ayaa hayn doona ilaa laba maalmood laakiin runti waxaa loola jeedaa in la cuno maalinta la sameeyay.
Keega ama burka cajiinka ah ayaa aad muhiim ugu ah qashinkan rooti jilicsan. Ka raadi bur jilicsan ama burka borotiinka hoose ee aaggaaga oo leh maadada protien ee 9% ama ka yar. Waad awoodaa caano beddel ah caano joogto ah oo lagu daray 2 qaado oo khal khal cad ah lagu daray Waxa kale oo aad u isticmaali kartaa caano budo ah biyo Natiijooyinka ugu wanaagsan ee suurtogalka ah, ka akhriso boostada iyo habka loo diyaariyo si looga fogaado khaladaadka guud. U adeegso cabir si aad u miisaanka maaddooyinkaaga (oo ay ku jiraan dareerayaasha) haddii aan si kale loo faraynin (Qaadooyinka, qaadooyinka, qayilaada iwm). Qiyaasaha mitirka ayaa laga heli karaa kaarka cuntada. Maaddooyinka miisaanka ku jira ayaa aad uga saxsan isticmaalka koobabka waxayna kaa caawinayaan hubinta guusha cuntadaada. Cabbiraadaha mitirka (garaam) ayaa la heli karaa adiga oo gujinaya sanduuqa yar ee ka hooseeya maaddooyinka ku jira kaarka cuntada ee ku suntan 'metric' Layliska Mise en Place (wax kasta oo meesha ku yaal). Cabbiro maaddooyinkaaga ka hor wakhtiga oo diyaari iyaga ka hor inta aanad bilaabin isku-darka si loo yareeyo fursadaha si shil ahaan wax uga tagi kara. Isku day inaad isticmaasho isla maaddooyinka ay ku baaqeyso cuntada. Haddii ay tahay inaad beddel sameyso, la soco in cuntada laga yaabo inaanay sidii hore u soo bixin. Waxaan isku dayaa inaan taxo bedelka meesha ay macquul tahay.
U adeegida:1adeegaya|Kalori:235kcal(12%)|Kaarboohaydraytyada:44g(shan iyo toban%)|Protein:8g(16%)|Dufan:3g(5%)|Dufan Dufan:1g(5%)|Kalastarol:5mg(laba%)|Sodium:549mg(2. 3%)|Kaliumperyamper:124mg(4%)|Fiber:1g(4%)|Sonkor:3g(3%)|Vitamin A:82IU(laba%)|Kaalshiyam:66mg(7%)|Bir:1mg(6%)
sida loo sameeyo dhadhanka isku darka cake sida roodhida
sidee ayuu u dhadhamiyaa keegga maro jilicsan
oo ah ciyaaryahanka ugu weyn kubbadda koleyga
milkiilaha qabow iyo nicki minaj oo kala jabay